रोग नियन्त्रण पुरानो सिद्ध विधि: खुट्टा ऊंची उडान भरना। यसलाई मदत गर्छ?
भएदेखि हाम्रो हजुरआमा को दिन रोगहरूबाट विरुद्ध संघर्ष को मानिसहरूको विधिहरू धेरै माथि लाग्यो। बन्दागोभी पात, एक चिसो मा उसिनेर आलु भन्दा सास फेर्न र चिसो - - खुट्टा ऊंची उडान भरना उदाहरणका लागि, एक कट लागू plantain, edema वा चोट जब राख्न। Oddly पर्याप्त, पनि एक भयानक आधुनिक पारिस्थितिकी र utterly कमजोर उनको शरीर, यी विधिहरू छन् अझै पनि प्रभावकारी र उपयोगी, यदि छैन कट्टरपंथी, मा संयोजन अन्य विधिहरू।
त्यसैले, उदाहरणका लागि, एक लामो जाडो पैदल पछि घर, अल्छी रोकथाम गर्न हुन छैन: खुट्टा हरेक समय पनि अलिकति indisposition महसुस ऊंची उडान भरना गर्न समय लाग्न। राम्रो र रोग नै दुखेको घाँटी, खोकी र रूघाँ महसुस बनाउँछ भने, यो प्रक्रिया बस बेबदल र अपरिहार्य हुनुपर्छ।
यो उपचार को अर्थ के हो? यो शरीर कसरी असर गर्छ? को भन्ने तथ्यलाई तातो पानी रगत प्रवाह बढावा। यसरी थप रगत शरीर, अर्थात् को खुट्टा मा तल्लो भाग मा र outflow हुन्छ माथिल्लो भाग मा फैलाइएको छ। तदनुसार, हामी (फेफडों, sinuses र श्वसन पर्चा को काम) सास सुविधा चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो खुट्टा ऊंची उडान भरना गर्न imperative छ।
Contraindications र नतिजा भने बाँकी उपेक्षित,
अधिकांश मानिसहरू आफ्नो अहानिकारक भए तापनि वा छैन यो प्रक्रिया हो, contraindications बारेमा आश्चर्य? उदाहरणका लागि, एक तापमान वा अन्य रोगहरु मा खुट्टा ऊंची उडान भरना गर्न सक्नुहुन्छ? हो, contraindications छन्, र तिनीहरूलाई बेवास्ता खराब नतिजा गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईं खुट्टा ऊंची उडान भरना गर्न सक्दैन:
एक तापमान तातो पानी मा यो अझ बढ्छ किनभने;
गर्भावस्था को समयमा - यो पहिले contractions गर्न, सक्छ आक्रान्त;
तुरुन्तै बाहिर जानुअघि।
खुट्टा कसरी ऊंची उडान भरना गर्न
खुट्टा फ्लोट गर्न आवश्यक "मन संग।" उच्च पक्ष (वा बाल्टिन), उम्लिरहेको पानी, तोरी पाउडर वा तोरी (यी घटक एलर्जी छैनन् भने), कम्बल, तौलिया संग एक तातो पानी केतली, न्यानो मोजा (साथ कचौरा: तपाईं प्रक्रिया को लागि आवश्यक र कुन पछि आवश्यक सबै तयारी सबै भन्दा राम्रो ऊन)।
ऊंची उडान भरना खुट्टा पानी मात्र छैन खुट्टा मा कम गर्नुपर्छ, तर टखने (कम्तिमा आंशिक)। पानी उम्लिरहेको खन्याउन कुनै आवश्यकता र भोग्न: बारे 37-38 डिग्री तापमान, र रूपमा लत झटका केतली केही तातो पानी बन्द सुरु गर्नुहोस्। प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि, पानी वा तोरी पाउडर मा भंग - यो Tissues एक राम्रो ताप बढाउँछ र रक्त प्रवाह सुधार। केही मानिसहरू यस्तो chamomile, पुदीना र ऋषि रूपमा जडीबुटी, को जलसेक खुट्टा ऊंची उडान भरना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो सम्भव छ, तर यो तपाईंको छाला नरम र खुट्टा, र कुनै थप गर्नेछ। जब फारममा इन्जेस्टेड यो decoction मात्र उपयोगी छ मह संग चिया। तर तपाईं यी जडीबुटी उम्लिरहेको वा आवश्यक तेल हो थप्न निर्णय भने, एक ठूलो तौलिया वा कम्बल संग बेसिन भन्दा आफ्नो टाउको कवर। त्यसैले, तपाईं पनि inhalation प्रक्रिया हो, यो चिकित्सकीय प्रभाव सुधार हुनेछ जो पास। यो प्रक्रिया को अवधि 10-15 मिनेट छ।
पानी प्रक्रियाहरु ड्राई फिट भिजेको तौलिया आवश्यक र पूर्व-तयार धारण पछि न्यानो मोजा। केही समय मह संग उपयोगी हर्बल चिया एक कप एउटा कम्बल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न राम्रो छ।
को pernicious आवेग को छुटकारा रही लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था लोक लागि उपाय के हो?
औषधीय बिरुवाहरु - bearberry। उपयोगी गुण र contraindications
वोदका मा जोर गर्नु भनेको: घर बनाइएका व्यञ्जनहरु
होम्योपैथिक औषधि र प्रयोगको सूची
RMB कम्पनी: बजार केन्द्रीय बैंकहरू देखि कार्य पर्खिरहेका
किन कम्प्युटर बन्द गर्न एक घडी चाहिन्छ
अनुग्रह अवधि क्रेडिट कार्ड बचत बैंक
"Broksinak" आँखा खस्छ: पुस्तिका, समीक्षा, analogs
भाग्य - र भाग्य र इलाका